भ्रस्टाचारि हरुको एउटै आवाज,” पशुपतिलाइ जेल हाल” भन्न सक्छन ? - सुदूर नेपाल
भ्रस्टाचारि हरुको एउटै आवाज,” पशुपतिलाइ जेल हाल” भन्न सक्छन ?
काठमाडौं। देशलाई माया गर्नेलाई सजाय हुन्थ्यो भने यति बेला पशुपति शर्माले सजाय भोगिरहेका हुन्थे, यतिबेला धुर्मुस सुन्तलीले सजाय भोगिरहेका हुन्थे, रवि लामिछानेले पनि सजाय भोगिरहेका हुन्थे | देशलाई माया गर्नेहरुले यतिबेला विभिन्न मध्यमबाट देशका भ्रस्ट नेताहरुलाई झटारो हानिरहेका छन् | पछिल्लो समय लोक गाएक पशुपती शर्माले सार्वजनिक गर्नुभएको गीत “लुटने सकेको लुट, नेपालमै हो छुट” अहिले युटुब तताइरहेको छ भने उक्त गीतले नेपालको तत्कालिन सरजाकाललाइ दरो झापड हानेको छ। उक्त गीतमा रास्ट्रपतिलाई समेत १८ करोडको गाडि र डेड अर्बको हेलिकप्टरको व्यङ्य कडा रुपमा गरिएको छ भने, अहिलेको कम्युनिस्ट सरकारका गलत कामलाइ सिधै गतिलो टिप्पणी गरेको छ। कम्युनिस्ट सरकारको अधिनायकवाद चरित्र अनि अरिङ्गाले नियत हेर्ने हो भने येस्ले सरकार बिरुद्द बोल्ने कसैलाइ बाकि राखेको छैन। जस्ले सरकारको खुलेर बिरोध गर्छ तेस्लाइ अरिङ्गाल जसरी आक्रमण गर्न प्रधानमन्त्रीले नै आदेश दिनुभएको छ।
वाइडबडी, निर्मला हत्या कान्ड, ३३ किलो सुनकान्ड सबैलाइ व्यङ्ग्य हानेर सरकारको बिरुद्द यो गीतले कडा झापड दिएको त छदै छ तर अब येस्को सामना पशुपती शर्माले कसरी गर्लान ? अब भ्रस्टाचारि हरुको एउटै आवाज,” पशुपतिलाइ जेल हाल” भन्न सक्छन । देश र जनतालाउ लुटेर खान पल्केकालाइ यो गीतमा सिदै प्रहार गरेपछी भ्रस्टाचार अनि लुटपाटको खेती गर्नेहरु पशुपती शर्मा देखि रिसाएका छन । माथिल्लो तहमा पौच राखेर उनिहरुले पशुपती शर्मा माथी जे पनि गर्न सक्छ्न तर पशुपती जि नडराउनु होला। एउटा कलाकारले गर्नुपर्ने येस्तै हो। समाजमा भएका नराम्रा कुरालाइ नराम्रो भन्न सक्नुपर्छ।
पशुपती शर्माले नेपाली राजनितिमा अहिले भैराखेको अराजकता र वास्तबिकतालाइ समेटेर बनाएको गीत भाइरल भएपछी अब त्यो गीतलाउ रास्ट्रपति भवन अगाडि लगेर बजाउनु पर्नेमा सामाजिक सब्जालमा जनताहरुले जोड दिएका छन। १८ करोडको गाडि र डेड अर्बको हेलिकप्टरको कुरालाइ गीतमा समेटेपछी पशुपती शर्माको गीतमा लाइक को ओइरो बर्सेको छ र गीतले नेपाली परिवेशलाइ ठ्याक्कै दर्शाएको छ। उक्त गीतको चौतर्फि चर्चा छ । आउनुहोस भिडियोमै हेरौ अनि कमेन्टमा भन्नुहोला , के यो गीत शितल निवासको गेटमै लगेर बजाउनु उचित होला त? बास्तबिक कथा बस्तुमा रहेर धेरै गीत गाउने गायक पशुपती शर्माको नयाँ गीत सार्वजनीक भएको छ । लुट्न सके लुट बोलको उक्त गीत गायक शर्माले बिहिवार आफ्नै आधिकारीक यूटूब च्यानल मार्फत भिडियो सहित सार्बजनीक गरेका हुन्। पहिलो अनलाईन खबर बाट साभार गरेका हु ।
Previous Post: ए भगवान के गर्यो यस्तो: श्रद्धाञ्जली १० बर्ष को बालक जिबको ठक्करबाट मृत्यु
Next Post: सेयर गरौ : अन्तत पशुपती शर्माको गीत युट्युबबाट हटाइयो,आखिर किन ?